युवाहरुको मानसिक स्वास्थ्यका लागि इस्टाग्राम सबैभन्दा घातक - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
युवाहरुको मानसिक स्वास्थ्यका लागि इस्टाग्राम सबैभन्दा घातक
Posted by Headline Nepal | २ आश्विन २०७४, सोमबार १३:५२ |
२ असोज, काठमाण्डौँ । बेलायतमा गरिएको एक सर्भेले समाजिक सञ्जाल इस्टाग्राम युवाहरुको मानसिक स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा खराब भएको देखिएको छ ।
उक्त मतसर्वेक्षणमा १४ देखि २१ वर्ष उमेरका १ हजार ४७९ जना युवाहरुलाई शीर्ष पाँच सामाजिक सञ्जालमध्ये कुनले बढी नकारात्मक प्रभाव पारेको सोधिएको थियो ।
जसमा चिन्ता, निराशा, एकाकीपन, धम्की र शरीरको छविलाई आधार बनाइएको थियो ।
रोयस सोसाइटी फर पब्लिक हेल्थ स्टडीले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र मानिसक समस्या भएका प्रयोगकर्ताको पहिचान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
रिपोर्टले भन्छ, समाजिक सञ्जालले युवाहरुको लागि मानसिक समस्या बढाइरहेको छ ।
अन्य उमेर समूहको तुलनामा सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत युवा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । त्यही भएर उनीहरु यसका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी खतरामा रहेका छन् ।
यद्यपि, अहिलेको अध्ययनले यस्ता खतरा के केमा हो भनेर चाहीँ प्रष्ट पारेको छैन ।
इस्ला अहिले २० वर्षकी भइन् । टिनएजर हुँदा उनी समाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिइन् । शुरुवातमा उनलाई समाजिक सञ्जालबाट आफूलाई महत्व दिइएको भान भयो । तर, विस्तारै उनी वास्तविक जीवनभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय हुन थालिन् जसले उनलाई १६ वर्षको उमेरमा नै डिप्रेसनमा पुर्यायो ।
तर, पछि उनी यसबाट उम्कन पनि सफल भइन् । अहिले समाजिक सञ्जाललाई नै उनले सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्न सुरु गरेकी छिन् । उनी मानसिक स्वास्थ्यबारे लेख्छन् र मानिसहरुसँग कुरा गर्छन्, उनीहरुलाई यसबारे सचेत गराउँछिन् ।
अनलाइन गरिएको सर्वेक्षणमा युट्युव, इन्सटाग्राम, स्नापच्याट, फेसबुक र ट्वीटरले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो पारिरहेको भनेर सोधिएको थियो ।
जसमा युट्युवबाट सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव परेको र स्नापच्याट र इन्सटाग्रामबाट सबैभन्दा बढी नाकारात्मक प्रभाव परेको नतिजा आएको थियो ।
Previousहप्तामा कतिपटक सेक्स गर्नु उचित ?
Nextओठ सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय
स्पेनबाट स्वतन्त्र हुने घोषणा गरेपछि क्याटलोनियाको संसद र सरकार भंग
११ कार्तिक २०७४, शनिबार ०७:२९
नेपालमै पहिलो पटक झापामा बाल महोत्सव हुँदै
३ माघ २०७३, सोमबार १२:२८
शो छोडेर जानेहरुलाई पनि कपिलको धन्यवाद !
११ बैशाख २०७४, सोमबार १२:५९
पुरानै संरचनामा चुनाव गराउनुपर्नेमा नेता पौडेलको जोड
१२ पुष २०७३, मंगलवार १३:३६